COVID-19 Cusbooneysiinta & Kheyraadka - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Update > COVID-19 Cusbooneysiinta & Kheyraadka
Marka la eego dabeecadda isbeddelaysa ee COVID-19 (CORONAVIRUS) Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) wuxuu u furnaan doonaa ganacsi laakiin wuxuu ku bixin doonaa adeegyadeenna taleefan iyo fiidiyoow hadda ah.
Dhismaheennu hadda waa u xiran yahay dadweynaha guud waxaanan dib u fureynaa talooyinka aan sugeyno ee Waaxda Caafimaadka Bulshada & Deegaanka ee Colorado.
Fadlan kala xiriir khadkayaga guud lambarka 303.922.3344 si aad uga tagto farriin annaguna waannu kaaga jawaabi doonnaa sida ugu dhakhsaha badan.
Ama waxaad la xiriiri kartaa khadkeena khadka tooska ah ee adeegyada ama toos ula xiriir shaqaalaheena:
Khadka tooska ah ee adeegyada sharciga: 970-430-6729 ama emayl kevin@coloradoimmigrant.org
Khadka Tooska ah ee Khadka Tooska ah ee jawaab celinta Colorado (dhacdooyinka ICE): 1-844-864-8364
Ruqsadda Darawalnimada ee Taakulaynta Cusbooneysiinta ee taleefanka.
Ballan ku dhig halkan inaad caawimaad ka hesho cusboonaysiinta liisanka darawalnimadaada.
Waxaan sidoo kale sameyn doonnaa barta tooska ah ee facebook si aan uga jawaabno su'aalahaaga ku saabsan SB251 liisamada darawalnimada Abriil 11-keeda laga bilaabo 6-8 fiidnimo. Ku soo biir munaasabada halkan.
Su'aalaha kale ee laxiriira liisanka darawalnimada, fadlan booqo midka cusub Bogga Soogalootiga Xog-ogaalka ah ee Colorado si aad u hesho macluumaad sax ah oo cusboonaysiin leh
Ama emayl siena@coloradoimmigrant.org.
Liiska xiriirka shaqaalaha
Ogeysiiska Dacwadda Dadweynaha:
Kastamka iyo Adeegga Socdaalka Mareykanka (USCIS) ayaa ku boorinaya qof oo leh astaamo u eg Cudurka Coronavirus 2019 (COVID-19) (qandho, qufac, neef-qabad) si loo raadsado daaweyn caafimaad oo lagama maarmaan ah ama adeegyo ka hortag ah. Daaweynta noocan oo kale ah ama adeegyada kahortaga ah si xun uma saameyn doonaan shisheeyaha iyada oo qayb ka ah falanqaynta Eedeynta Dadweynaha ee mustaqbalka.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan COVID-19 iyo Kharashka Dadweynaha ee Xarunta Horumarinta Caafimaadka halkan.
Fariinta Shaqaalaha CIRC:
Dawladeena maxalliga ah iyo tan gobolka ayaa qaaday tallaabooyin adag oo lagu xaddidayo faafidda fayraska, oo ay ka mid yihiin xiridda xarunta, maktabadaha, degmooyinka iskuulada, iyo goobo badan oo shaqo, taas oo saamayn ba'an ku leh bulshooyinka soogalootiga ah ee ku baahsan gobolkeenna. Waxaan garwaaqsannahay in dad badan oo ka tirsan beesheena, oo ay ku jiraan bulshooyinkayada soo galootiga ah iyo bulshooyinka aan sharciga lahayn, ay noqon doonaan kuwa ugu saameynta badan dhibaatada.
Makhaayada gobolka ee la xiro, toogashada hoteelada, iwm, waxay sababaysaa shaqo la'aan iyo dakhli soo galootiga badankoodna xaq uma laha faa'iidooyinka shaqo la'aanta ee la siinayo muwaadiniinta Mareykanka iyo LPR-yada. Muhaajiriinta qaarkood waxay la kulmaan caqabado dheeraad ah si ay u helaan ilaha maxaa yeelay waxaa laga reebay adeegyada bulshada. Dhibaatada dhaqaale ee uu sababay virusku waxay uga sii dari doontaa kala duwanaanshaha dhaqan-dhaqaale, caafimaad iyo kala soocida soogalootiga ee bulshooyinka soogalootiga ah ee horeyba u wajahay Waa inaan midba midka kale daryeelo hadda in kabadan sidii hore.
Daryeelka midba midka kale waa waxa saxda ah in la sameeyo sidoo kale waa dariiqa loo abuurayo bulshooyinka qof walba lagu soo daro oo uu ku barwaaqoobo.
Halkan waa a dukumiinti leh kheyraad la heli karo waqtigan.
Kheyraadka Colorado ee ka socda ACLU Of Colorado
Liiska hantida qaranka ee dadka aan sharciga lahayn.
Waxaan sii wadi doonaa inaan ku dhisno liiskan maaddaama ilo badan la helayo.
Dhagsii sawirka si aad ugu soo dejiso luqado badan
Kheyraadka caafimaad ee dadka aan sharciga lahayn ama aan caymiska lahayn:
Kheyraadka Gobolka Colorado
Macluumaadka shaqo la'aanta xagga Cadaaladda.
Xarunta Kheyraadka Soogalootiga & Qaxootiga ee Waqooyiga Colorado
Xarunta Horumarinta Aasiya ee Baasifiga (APDC)
Cusbooneysiinta Aurora & Kheyraadka
Qaybinta Cuntada Aagga Denver
Kheyraadka kale ee soogalootiga & qaxootiga ku sugan Colorado: